Indlela ii-Primaries zeeRiphabhliki ezingama-2016 ezisebenza ngayo
Imithetho emitsha yokunciphisa inkqubo yenziwe yonke imohluko
Unyulo lukazwelonke lwango-2016 lwaluphawuleka ngenxa yezizathu ezininzi, kungekhona ubuncinane besiphumo. Izinguqu ezinkulu kwiinkqubo zaseprayimari zeprayimari ezenziwe ngexesha lokhetho lwe-2012 zenzelwe ukukhawulezisa inkqubo yokukhetha umviwa. Kodwa akuzange kusebenze ngale ndlela.
Kwenzeka ntoni ngo-2012
Imithetho yePhathi ifakwe phambi kokuba ukhetho loongameli luka-2012 lunwebe ixesha elithatha umtyunjwa ngokugqithiseleyo ukukhusela iindwendwe ezi-1,144 eziyimfuneko ekutyunjweni.
Abaviwa abathathu abaphezulu, uMitt Romney , uRick Santorum , kunye no- Newt Gingrich , bavalelwe emncintiswaneni ogqithiseleyo kude kube sekupheleni, xa i-Utah ibambelele ukugqibela kwezinto ezibucala kuluntu ngoJuni 26. Kwindibano yesigane yabanjwa ngenyanga kamva ETampa, eFlorida.
NgoNovemba, uRomney walahlekelwa ngumda omkhulu kuMongameli uBarack Obama , enikela u-Obama ithuba lesibini kwiNdlu eNtshonalanga . Kwiminyaka emibini kamva, iinkokheli zeRiphabliki zeQela zadibana nokuqulunqa imigaqo yee-primaries ze-2016. Inkxalabo yabo enkulu yayikuphepha enye inqabileyo ephambili eyayiza kubangela ukuba umntu otyunjwa ukuba achithe ixesha elide kunye nemali ukuzivikela ekuhlaselweni kwamalungu ebandla lakhe. USihlalo weKomiti yamaZwe waseRiphabliki uReeince Priebus ubeka ngale ndlela ngo-2014:
"Sithe satsho ngeenyanga kangangokuba sasingasayi kuhlala kunye kwaye sizivumele ukuba sicele kunye neadayisi ezintandathu ezintandathu, sithathe inxaxheba kwiiskithi zeengxoxo, ukuba sasiza kubamba kwakhona uxanduva lwethu kwiRiphabliqueki kaZwelonke. IKomidi kuba singabanqatshelwe kwinkqubo yokutyunjwa, "watsho.
Ngokwesiko, ii-Republica zase-Iowa zavota kuqala; baqakraza ngoFebruwari 1, 2016, banikela iTexas Sen Sen Ted Cruz uzuko oluncinci phezu kukaDonald Trump , iipesenti ezingama-28 ukuya kuma-24 ekhulwini. Ingaphantsi kweveki kamva, i-GOP yaseNew Hampshire yabamba isikolo sokuqala esikolweni ekuqaleni kukaFebruwari 9. I-Trump yanqoba i-35 ekhulwini yevoti.
I-Ohio Gov. UJohn Kasich, oya kuba inja uTrump kulo lonke uphuhliso, wathatha indawo yesibili kunye neepesenti ezingama-19 zevoti.
ISouth Carolina neNevada bavota kamva kwinyanga leyo, kwaye iTrump yaphumelela amazwe amabini. Kodwa Uyazi. UMarco Rubio waseFlorida noTed Cruz benza kakuhle. Umhlaba wasetyenziselwa ukukhawuleza okukhawulezayo, ukulwa okuphambili ku-Julayi 18 ekuqaleni kwendibano yesizwe.
Ngenxa yokuba iIowa kunye neNew Hampshire balondoloze isimo sabo sokuqala kwilizwe, i-GOP imigaqo yaqinisekisa ukuba nayiphi na amazwe eyazama ukuvota ngaphaya kwezi ziza kuhlwaywa ngokulahlekelwa ngabathunywa kwindibano yesizwe. Ukutshintshwa kwezi zizwe zakuqala kuya kunika ukuphucula kwangaphambili kwabaphumeleleyo.
Emva kweKwindla yaqala, isantya savuselela. Amazwe abambe iimfuno zawo phakathi kuka-Matshi 1 no-Matshi 14 kwafuneka anikezele abo bathunywa ngesiseko esifanelekileyo, nto leyo ithetha ukuba akukho mntu umviwa onokuyiphumelela ukutyunjelwa ngaphambi kokubanjwa kwexesha lokugqibela lokuvota. Amazwe avota ngoMatshi 15, 2016, okanye kamva anganikezela abo bathunywa kwi-winner-take-all, oku kuthetha ukuba abaviwa baya kubakhokela ingqalelo ngakumbi.
Njengoko iiveki zazigqoke, umncintiswano wehla waya eTrump naseRroz, kunye neKasich ekude ukuba i-vocal yesithathu. Ngethuba leprayimari yaseIndian Republican lenzeke ngoMeyi 3, kwabonakala ukuba iTump iya kuphumelela ukutyunjwa emva kokuba i-Cruz ifike okwesibini kwintsebenzo kwaye emva koko yashiya ngaphandle komncintiswano.
I-Trump yawela ngokusemthethweni umnqweno weendwendwe we-1,237 xa iphumelele kwi-Primary North Dakota ngoMeyi 26.
UDonald Trump waqhubeka ekuphumeleleni ukhetho loongameli lukaNovemba kunye neRiphabhlikhi yePartiya yagcina ilawulwa yizo zombini izindlu zeCongress. Kodwa nangaphambi kokunyulwa, ezinye iinkokheli zeqela zathetha ngeenguqu kwiinkqubo eziphambili ze-2020. Phakathi kwabo kwakukho isiphakamiso sokuvumela kuphela amaRiphabhliki abhalisiweyo ukuba avote. I-Trump iphumelele kwimibandela yaseMzantsi Carolina kunye ne-Nevada ngenxa yokuba zombini amazwe avumela abazimeleyo ukuba bavote. Ukususela ngo-Agasti 2017, i-GOP ayisayisebenzisi le mpuquko.
Indlela yokuSebenza kwama-Privaries
Kutheni i-New Hampshire Prayimari ibaluleke kangaka
Uluhlu lweeNgqungquthela Iingoma ezisetyenziswe ngabaviwa bakaMongameli
Abakhethiweyo kuNyulo loMongameli olandelayo
Yiyiphi i-Poop Fossil ekwazi ukusitshela malunga neDinosaurs
Iingxabano zobuhlanga kunye neMidlalo yeOlimpiki
Ukusebenzisa i-'Oír 'ne'Escuchar'